Nhau - Kuchinja maitiro
Hunhu hwePSC hwakanyorwa-kunyanya hunhu hwayo husina mvura-ndiwo makiyi ekutengesa emaRSA. Inoratidzwa iAxiscor's Pro12.
Chikamu cheLVT, chakasimba pakukura chinorema chinorova, chakaona kumwe kuchinja kukuru kuchiitika mu2019. Kubva pakudonha kwekuchinjika kwakachinjika kusvika pakuwedzera kwakasimba uye SPC nekudyiwa kwayo kwechikamu cheWPC, LVT yaitungamirwa nezvinhu zvakawanda zvitsva.
"SPC ndiyo inokura nekukurumidza chikamu nekuda kweaesthetics yakakura, isina mvura zvivakwa, kusagadzikana kwesimba, kudzikama kwekuenzana uye kukosha kwese," akadaro Ana Torrence, akaomarara pamusoro pechikwata maneja, Injiniya Pasi. "Hunhu uhu, pamwe chete neyakareruka yekumisikidza, zvakakurudzira kukura kwechikwata ichi mukurumbira panguva iyo vashoma vanokwanisa vari kushomeka."
Vanoona nezvemaindasitiri vanobvumirana, SPC iri kunyanya kutora chikamu kubva kune zvimwe zvikamu nekuda kwehunhu hwayo hwekuita. "Huru nhatu dzakadzikama, telegraphing uye tembiricha," akadaro Jeff Francis, akashinga chikamu director, pekugara chikamu, Shaw Maindasitiri. "Uye inongoramba ichiita. Hatifunge kuti SPC yaitwa - isu tichiri mukukura tisati tarova hupenyu uye kutanga kukwirisa. Handisi kuzviona izvo zvichichinja kudzamara chimwe chinhu chikuru chauya."
FCNews tsvagiridzo inoratidza kuti mugore rimwe chete chikamu chidimbu chakapetwa kaviri maererano nevhoriyamu uye chinopfuura zvakapetwa kaviri maererano nemadhora. Sekutsvagurudza, chikamu chidiki chakawana 37.1% yemusika weLVT maererano nemadhora ekugara kana madhora 1.126 bhiriyoni, akaenzana ne $ 490 mamirioni muna 2018. Nezve huwandu hwekugara, SPC yakaita 33.4% yemusika weLVT kana mamirioni 667.5. tsoka dzakaenzana, zvichienzaniswa ne335.5 mamirioni tsoka tsoka muna 2018.
Kumhanya kwePSC pane mumwe wayo weWPC kunoonekwa munhamba. FCNews tsvagiridzo inoratidza WPC yakaramba 17.4% maererano nemadhora kusvika $ 929 mamirioni mu2019, zvichienzaniswa ne $ 1.125 bhiriyoni mu2018. Nezve vhoriyamu, WPC yakaderera 16% kusvika 429 mamirioni tsoka tsoka mu2019, zvichienzaniswa nemamirioni 511 mamirioni tsoka muna 2018
"Kudyara kushoma [kushinga] kuri kuwedzera huwandu hweWPC," akadaro Ed Sanchez, mutevedzeri wemutungamiri manejimendi chigadzirwa, Mohawk Maindasitiri. "Pasi rose, ndinofunga muchaona vanhu vachitarisa vachichinja kugadzira kwavo kubva kuWPC kuenda kuSPC. Mashoma mashoma maSKU matsva akaitwa muchadenga anga ari muWPC. Ndiwo maitiro anoenderera mberi kusvikira tazoona hunyanzvi hunotevera."
Kana tichienzanisa WPC vs. SPC, Kurt Denman, mukuru wekushambadzira, Kongo, akati, "Unotengesa zvisingaite hunhu kubva kuWPC kuenda kuPSC, asi unozviwana pamutengo uri nani. Saka, tinofunga kuti zvichiri kuenderera mberi. kuve chikamu chiri kukura, uye ichaendesa WPC yese kuSPC. "
"Sanchez yaMohawk yakatsanangura kuti mashandiro eWPC vs. SPC yakauya kune vatengi vazhinji vakatanga makore mashanu kusvika matanhatu ekufamba mwaka wa2019." Vari kuona kuti WPC, kunyangwe yanga yakanaka, haina kusagadzikana kwakafanana kunoitwa nePSC nyowani, "akatsanangura. "Saka, urikuona data rakawanda richidzoka kubva kune vatengi avo- mushure mekufambisa mafiriji uye masofa anorema - vari kuona matenga. Izvo zviri kuumba ruzivo rwakawedzera, uye SPC inokupa iwe zvese mabhenefiti [eWPC] pamwe nekugadzirisa mamwe nyaya idzi. "